Ndiwe wako Windows 10 PC inoramba ichidonha here? Ndiwe wako Windows 10 PC inonyanya kunyanya? Uri kuwana kushayikwa kana kusina kukanganisa mukati Windows 10? Runza rakagadzirwa-muSystem File Checker chigadziro chekugadzirisa nyaya idzi.
Siri File File Checker murairo wemirayiridzo inoshandiswa mu Windows 10 iyo inobvumira vashandisi kuverenga kuti vashayike uye vakaora mafaira mafaira uye vanoigadzirisa. Icho chishandise chinogona kushandiswa kuburikidza neArade Prompt kana PowerShell.
The System File Checker tool inobatsira kana PC yako isiri kushanda sezvinotarisirwa kana kuratidza mafaira asina kuwanikwa kana kukanganisa.
Run System System Checker in Windows 10
Pedzisai apa apa pasi apa mazano ekushandisa System System Checker tool in Windows 10.
Step 1: Vhura Command Prompt semutungamiriri. Iwe unogona kuita izvozvo nokunyora CMD muStart / taskbar yekutsvaga, kutsvaga zvakarurama paMutevedzeri wekudaira uye nekudhonza Mhanya semutungamiri kuita.
Click Ehe bhatani kana iwe ukatora Quick User Control.
Step 2: Pawindo reMutambo Wemagetsi, unofanirwa kuita chirongwa ichi chinotevera DISM usati watanga System System Checker tool.
Iwo wekuraira wepamusoro unoshandisa Windows Gadziridza kurodha pasi mafaira anodiwa kugadzirisa huori hwefaira.
Kana iwe wakaremara Windows Gadziridza kana Windows Kwidziridzo haisi kushanda nechimwe chikonzero, ndokumbira ubatanidze Windows 10 bootable media kuPP yako uye wotanga murairo unotevera panzvimbo yepamusoro. Kana iwe usina bootable media, download Windows 10 latest version ISO kubva kuMicrosoft, gadzira ISO file, uye ozoita murairo unotevera.
DISM.exe / Online / Cleanup-Image / KudzoreraHealth / Kunobva: C: RepairSourceWindows / LimitAccess
Murairo iri pamusoro apa, shandisa "C: RepairSourceWindows”Ine nzvimbo yesosi yekushandisa.
Step 3: Zvadaro, chengetedza mutemo unotevera wozovhara Enter key.
Murairo wepamusoro unotarisa zvose zvakachengetedzwa mafaira uye inotsiva mafaira akaora nekopi yakachengetwa yepepa iripo mune faira yakanyora iri pa System32dllcache.
Murairo wepamusoro unogona kutora nguva yekuita. Saka, iva nomwoyo murefu.
Step 4: Kana imwe nguva faira chefaira chepurogiramu ichipedza basa rayo, uchaona rimwe remashoko anotevera:
# Windows Kuchengetedzwa Kwezvivakwa hakuna kuwana chero kutyorwa kwekuvimbika
Mharidzo yepamusoro inoratidza kuti hapana chekushaya kana kukanganisa mafaira epa PC yako.
# Windows Resource Kudzivirirwa hakugone kuita basa rakakumbirwa
Kana iwe ukawana uyu mharidzo, ungada kuedza System System Checker in Safe mode zvakare. Tinokurudzira kushandira System File Checker zvakare zvakare mumutambo wemamiriro ekunze musati maedza kuti mumhepo yakachengeteka.
# Windows Resource Kudzivirirwa kwakawana mafaira akaora uye akabudirira kuagadzirisa.
Iwe uchawana mharidzo yepamusoro apo System File Checker ichiona kuti yakaora kana kuti inoshaya mafaira uye yakakwanisa kugadzirisa iyo pasina nyaya.
# Windows Resource Kudzivirirwa kwakawana mafaira akaora asi akatadza kugadzirisa mamwe acho.
Kana iwe ukawana uyu mharidzo, unogona kuedza kushandisa System File Checker tool zvakare kana kuti ona yeiyo mafaira (% WinDir% LogsCBSCBS.log) uye wozogadzirisa mafaira maitiro akaora.
Inofanirwa neIndaneti File Checker inokundikana kugadzirisa nyaya yacho, unogona kuedza kudzorera Windows 10 kusvika kune imwe yapfuura or repair Windows 10 kuisa pasina kurasika mapurogiramu uye data yako.
Gadziridza: DISM kukanganisa 2 mukati Windows 10 PC
DISM Error 1009 - Iyo yekumisikidza registry dhatabhesi yakashata